Roodhiyaam - Wikipedia
Roodhiyaam (ingiriis: Rhodium) astaanta (Rh) waa curiye kimiko oo leh lambar atom afartan-iyo-shan ah. Curiyaha Roodhiyaam waa bir, adag, nuuraysa oo leh midabka naxaasta oo dhalaalaysa ama iftiimaysa.
Roodhiyaamta waxaa la helaa ayadoo ah hal nooc oo isotope ah, kaas oo ah 103Rh. Markay birta dabiiciga ee xorta ah tahay, waxaa laga helaa oogada dhulka ayadoo bir adke ah oo u qaab dhow jaandiga. Sidoo kale, waxaa la helaa ayadoo isku dhisyada Rhodplumsite iyo Bowieite ah.
Curiyahan wuxuu ka tirsan yahay birta loo yaqaano Transitional Metalska. Waxayna ka mid tahay biraha ugu qaalisan macdanta laga helo dhulka.
Roodhiyaamta oo uu helay sanadkii 1803 saynisyahan William Hyde Wollaston, ayaa waxay adkeysi fiican u leedahay daxalaysiga, waxayna ka mid tahay Biraha Balaatiiniyaamka loo yaqaano.
Marka lagu daro curiyeyaal kale, 80% Roodhiyaamka waxaa loo isticmaalaa biraha laga sameeyo gaadiidka. roodiyam waxa kamid tahay lixda birood ee loo yaqaano PMG taasoo macmaheedu yahay platinum metal group,
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Roodhiyaam&oldid=143908"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 May 2015, marka ee eheed 13:55.